अन्धविश्वास र कुरीतिविरुद्ध लड्न थारू कल्याणकारिणीको आह्वान
ओमप्रकाश चौधरी, सेढवा, १४ साउन/ बोक्सीको आरोपमा हत्या गरिएकी पार्वती राउत थरूनीको १३ औं पुण्यतिथि आज सम्पन्न भयो । सो अवसरमा थारू कल्याणकारिणी समिति पर्साले कार्यक्रम आयोजना गरी श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेको थियो । कल्याणकारिणी समिति पर्साका अध्यक्ष हेमनारायण चौधरीको सभापतित्व एवं पूर्वमन्त्री मोहनलाल चौधरी र इलाका प्रहरी कार्यालय, पटेर्वा सुगौलीका प्रहरी निरीक्षक श्यामकृष्ण केसीको विशेष आतिथ्यमा सम्पन्न श्रद्धाञ्जलिसभामा वक्ताहरूले थारू समुदायमा अन्धविश्वास र कुरीति अझै यथावत रहेकोप्रति दु:ख व्यक्त गरे । वक्ताहरूले महिला हिंसा तथा बोक्सी प्रथाजस्ता अन्धविश्वासविरुद्ध सबैले आआफ्नो स्थानबाट लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्याक्त गरेका थिए । उनीहरूले पार्वती देवी हत्या प्रकरणमा संलग्न सबै दोषीलाई कुनै पनि हालतमा उम्कन नदिई कानुनी कठघरामा ल्याउन समाजले सक्दो पहल गर्ने बताउँदै सो कार्यमा सहयोग गर्न जनसमुदायलाई आग्रह गरे । पीडित परिवारजनलाई भयमुक्त वातावरणमा ससम्मान समाजमा पुनस्र्थापनाका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने समितिका अध्यक्ष हेमनारायण चौधरीले बताए । कार्यक्रममा
फाउन्ड्री एशोसिएसन बङगलादेश र वीउवा सङ्घबीच छलफल
वीरगंज, १४ भाद्र/ वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारी एवं फाउन्ड्री एशोसिएसन, ब·लादेशका पदाधिकारीबीच द्विपक्षीय व्यापार विस्तारबारे भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । फाउन्ड्री एशोसिएसन, ब·लादेशका अध्यक्ष ऐनुल हक सोहेलले नेपाल–ब·लादेशबीच विद्यमान व्यापार सम्बन्ध विस्तार तथा द्विराष्ट्रिय व्यापार आभिवृद्धि सहज तुल्याउन आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधिबारे जानकारी प्राप्त गर्नु भ्रमणको उद्देश्य रहेको कुरा मन्तव्यमार्फत् व्यक्त गरेका थिए । उक्त भेटघाट कार्यक्रममा वीउवासङ्घका अध्यक्ष बैदले विगतमा सङ्घबाट गएको व्यापारिक भ्रमण टोलीलाई ब·लादेशका व्यापारिक सङ्घसंस्थाहरूले त्यहाँको आर्थिक तथा औद्योगिक गतिविधिबारे दिएका जानकारी तथा सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले नेपाल र ब·लादेशबीच विद्यमान आर्थिक सम्भावना तथा अवसर विस्तार गर्न द्विपक्षीय सहकार्य हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै पर्सा/बारा क्षेत्रका आर्थिक, औद्योगिक गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए । अध्यक्ष बैदले वीउवासङ्घले उद्योग, व्यापारको विकास तथा निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिका दिशालगायत देशको आर्थिक विकासको लागि नि
डाँडामा जहाजजस्तो विस्मयकारी उद्योगको दर्शन
- सञ्जय साह ‘मित्र’ यात्राका क्रममा आँखामा जे जति दृश्यहरू आउँछन् सबैले हेर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कोही हेर्नबाट वञ्चित हुन्छ भने ऊ एउटा सौभाग्यबाट टाढिएको हुन्छ । अझ नयाँ ठाउँमा पुग्नेले त झन् आफ्ना चर्मचक्षुलाई चनाखो राख्नु उचित हुन्छ । यात्रामा समयको व्यय होइन, उपयोग हुन्छ र यात्राको सार्थकताले पनि सुनमा सुगन्ध थप्ने हुन्छ । यसै कारण यात्राहरूमा मलाई निद्रा कमै लाग्छ । यसो भनूँ यात्रामा निद्रादेवीले मलाई अँगालोमा बाँध्न डराउँछिन् । निद्रासित झगडा भएको त मलाई थाहा छैन तर कुनै न कुनै वैमनस्यता भएको हुनुपर्छ वा निद्रालाई कसैले मविरुद्ध कुनै फतुर लगाएको हुनुपर्छ । यसै कारण चलिरहेको कार होस् वा बस वा रेल नै किन नहोस्, मेरो छेउमा निद्रा आउनुअघि हजारपल्ट सोचविचार गरेको मैले अनुभूति गरेको छु । रौतहटको गरुडाभन्दा करिबकरिब छ सय किलोमिटर दक्षिण–पूर्व झारखण्ड (भारत)को दुम्का जिल्लालाई छिचोल्न हामी हानिएका हुन्छौं, दक्षिणतिर कलकत्ताको जिटी रोडलाई भेट्न । साउन महिनाको अन्तिम दिन हुनुपर्छ । घरबाट निक्लेको तेस्रो दिन भइसकेको छ । यात्रा कलकत्ता घुम्ने किसिमको मनसायले अभिप्रेरित छ । विस्तारै ज
जानुका तीजमा माइत गइनन्
- समीर पाख्रिन हिन्दू नारीहरूको महान् चाड हरितालिका तीज पर्वमा विकृति, विस·तिहरू भित्रिएका छन् भन्ने टीकाटिप्पणीहरू जताततै सुनिन थालेका छन् । तीज नजिकिंदै जाँदा समाजमा देखिने तडकभडकपूर्ण गतिविधिलगायत विभिन्न नेपाली टिभी च्यानलहरूमा प्रसारण हुने तीज सम्बन्धी गीत नृत्यहरू क्रमश: भड्किलो र व्यावसायिक बन्दै गएको विषयलाई कथाले कटाक्ष गर्न खोजेको छ । बर्सेनि हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा माइत जाने जानुका यसपालि माइत गइनन् । तीज आउनु अघिदेखि नै बूढीआमा, बहिनीहरूका लागि कोसेली किन्न हौसिने जानुका यसपल्ट आफ्ना लागि मात्र एकजोर महँगो साडी, ब्लाउज, चुरापोते, टीका आदि सामग्री किनेर बजारबाट घर फर्केकी थिइन् । अफिसबाट फर्केका शिवशड्ढरले जानुकालाई घरैमा देखेपछि आश्चर्य मान्दै सोधेका थिए– “जानु १ तिमी माइत जाने भनेकी हैन ? गइनौ ?” “अहँ गइनँ”– जानुका छोटो जवाफ दिंदै लोग्नेका लागि चिया बनाउन भान्सातिर गएकी थिइन् । जवाफ सुनेर शिवशड्ढरको कौतूहल अरू बढेको थियो र उनले पुन: सोधेका थिए– “किन ? के भयो ? सञ्चो भएन कि क्या हो ? कि गाउँबाट बहिनीहरू आउँदै छन् ?” “त्यस्तो केही होइन । आ.. आजभोलि गाउँघरत
मेरो वीरगंज, हाम्रो वीरगंज
- चन्द्रकिशोर आज शहरप्रतिको लगावबारे कुरा गर्छु । कुनै ठाउँमा तपार्इं कति लामो बस्नु भो भन्दा पनि तपाईं त्यहाँको कतिको ‘इनसाइडर’ बन्नु भो भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्दछ । कोही यस्ता हुन्छन्– शहरमा कारोबार त गर्छन् तर शहरलाई आफ्नो मान्दैनन् । शहरमा बस्नु, लामो समय बिताउनु एउटा कुरा हो, तर शहरसँग आत्मीयता हुनु अर्को कुरा हो, यस्तै आत्मगौरव हुनु पनि फरक कुरा हो । यी सब कुरा बुझ्न, सम्झिन र अभिव्यक्त गर्न कम दुरुह छैन । बडा मसिना कुरा हुन्, बडा अनमोल कुरा पनि हुन् । वीरगंज आज धेरैका लागि मेरो शहर हो, अनेकौंका लागि हाम्रो शहर हो, मेरो र हाम्रोबीचको भेदमा ठूलो मनोवैज्ञानिक कुराहरू अल्झिएका छन् । शहरसँगको नाताका आ–आफ्ना कथा होलान्, साइनोका आ–आफ्नै सूत्रहरू होलान् । ती सबले एउटा परिवेश र परिबन्दको व्याख्या गरिरहेको हुन्छ । बडो कठिन छ यी कुराहरू बुझाउन । कोही यस्तो हुन्छ, जो शहरमा थोरै समयका लागि आउँछ, तर उसका लागि यो शहर आफ्नै लाग्छ । कोही यस्ता पनि होलान् जो यही हुर्के, बढे तर शहर बिरानो लाग्छ । कोही हेर्दाहेर्दै शहर नचिनिएको जस्तो अथ्र्याउँछन् । कसैलाई हेर्दाहेर्दै शहर कहिले आफ्नो भयो हेक
–कुमार रुपाखेती २०१७ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै राजा महेन्द्रले ठाडै सत्ताको बागडोर हातमा लिएर हदैसम्मको निरङ्कुशता प्रदर्शन गरेका थिए । राजा महेन्द्रको यो हस्तक्षेपपछि नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्र उदय भएको मानिन्छ । त्यसै पनि संसारभर नै एकलौटी राजतन्त्रलाई ‘निरङ्कुश’ शासन व्यवस्थाको बिल्ला भिराइन्छ । भनिन्छ अहिलेको युगमाा कतै पनि निरङ्कुश राजतन्त्रको गुन्जाइस र सम्भावना छैन । नेपालमा राजतन्त्र मटियामेट भएको लामै समय भयो, तर पनि नेपालमा पूर्व राजा वा राजतन्त्रले चलखेल गर्न थाल्यो, सत्तामा चासो लियो, राजनीति गर्‍यो भन्ने आरोप देरसबेर लाग्ने गरेको छ । कमल थापाहरूको राप्रपा, हिन्दूवादी सङ्घस·ठनहरू, राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरू अझै खुलारूपमा राजा वा राजतन्त्रको वकालत गरिरहन्छन् र गणतन्त्रवादी भनाउँदाहरूको टाउको दुखाइ बनिरहन्छन् । २०१७ सालको कदमको १० वर्षपश्चात् दियालो ब·ला चितवनमा राजा महेन्द्रको एकाएक स्वर्गवास भएको थियो । राजपाटबाट एकान्त खोज्न राजा महेन्द्र कहिले दियालो ब·ला चितवन, कहिले रत्नमञ्जील पोखरा, कहिले नागार्जुन डाँडा काठमाडौं त कहिल
बगेको खोला हिंडेको मानिस– कहाँ पुग्छ ठेगान हुँदैन
- बैद्यनाथ ठाकुर अनुभव अनुभूतिहरूको समष्टि हो । एउटा पुस्ताले गरेको अनुभव अर्को पुस्ताको लागि अमूल्य सम्पदा हो । समाजको प्रत्येक क्षेत्रमा प्रत्येक व्यक्तिले नयाँ–नयाँ अनुभूति प्राप्त गरिरहेको हुन्छ । देश, काल र परिस्थितिले तत्कालीन परिवेशमा रहेका प्रत्येक क्षेत्रमा खास प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । तिनै नयाँ–नयाँ प्रभावले नयाँ–नयाँ अनुभूतिहरूलाई जन्म दिइरहेको हुन्छ । संसारको परिवर्तनको यस नियमलाई बुझ्न नसकेपछि व्यक्तिहरूभित्र भाग्यवाद हावी हुन आउँछ । वास्तवमा प्रकृतिमा परिवर्तनको गोलचक्कर बडो जटिल हुन्छ । यसलाई द्वन्द्ववादी भएर बुझ्यो भने यसको सबै रहस्यमाथिको पर्दा उठाउन सजिलो हुन्छ अन्यथा एउटा अनन्त कालो लामो सुरुङभित्र भाग्य र भगवान्वादले मानिसलाई निरीह बनाएर जीवनभरि भौंतारिन छाडिदिन्छ । जहाँ ज्ञानको अभावमा, अझै खासरूपमा भन्ने हो भने विज्ञानको तथ्यमूलक ज्ञानको अभावमा मानिसहरू विभिन्न खाले भ्रमको शिकार हुन पुग्छन् । हो यही अवस्थाबाट फाइदा उठाउन राज्य तथा धर्मका ठेकेदारहरूले मानिसलाई हुँदै नभएको तेस्रो दुनियाँ, चमत्कारी दुनियाँ अर्थात् सुपर पावरको दुनियाँमा काल्पनिकताको संसार बनाएर
गाविस सचिवको हविगत
अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाविसका सचिवहरूमाथि आफ्नो वक्रदृष्टि केन्द्रित गर्न थालेको छ । यताका दिनमा गाविस सचिवहरू विभिन्न निकायबाट कारबाईमा पर्न थालेका छन् । हो पनि प्राय: गाविस सचिवहरूमाथि सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफूखुशी हिनामिना गरेको, लक्षित समूहभन्दा व्यक्तिगत प्रयोजनमा उपयोग गरेको लगायत गाउँको विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने रकम थोरै मात्र खर्च गरेर खाइदिने गरेको आरोपहरू लाग्दै आएका छन् । यी आरोपहरूमा प्राय: सही छन् । गाविस सचिवहरू गाउँ नजाने, आफ्नो सरोकारको गाउँका बासिन्दाहरूलाई सेवा उपलब्ध नगराउने, गाउँ परिषद् लुकीछिपी शहरको होटलहरूमा गरी पारदर्शिता भ· गर्नेजस्ता थुप्रै आरोपहरू गाविस सचिवहरूको थाप्लोमा लादिएका छन् । अति भएपछि अत्याचार हुन्छ र अत्याचारको निराकरण एक दिन हुन्छ थाहा भएर पनि गाविस सचिवहरू आफ्नो भविष्यप्रति उदासीन हुनु उदेकलाग्दो कुरा हो । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो गाविस सचिवहरूमाथि अवगाल आउँछ, आज दुई चारजना मात्र अख्तियारको फन्दामा परेका छन्, भोलि अरू पनि पर्लान्, अनि गाउँको काम कसले गर्ने, सेवा प्रदायक नै नरहेपछि गाउँले जनताको सामाजिक जीवन कहाँ पुग
अमेरिकी राजदूतको वीरगंज भ्रमण, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरेकोमा सङ्घको तारिफ
प्रस, वीरगंज १३ भदौ / नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत महामहिम पिटर डब्लु बोडीले नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको, आर्थिक विकासमा महिला सशक्तीकरणलाई समावेश गरिनुका साथै शिक्षाको विकास हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घले अमेरिकी राजदूतको वीरगंज भ्रमणका क्रममा आज आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा महामहिम राजदूत बोडेले मङ्सिर ४ गतेको चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र समावेशी हुनुपर्ने र जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले संविधान निर्माण कार्य टुङ्ग्याउने विश्वास लिएको बताए । उनले नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे प्रकाश पार्दै नेपालमा धेरै प्रगति भएको तर गरिनुपर्ने कार्य अझै बाँकी रहेको बताए । वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार बैदले वीरगंज आर्थिक तथा व्यापारिक नगरीको रूपमा परिचित नेपालको पुरानो शहर भएको र नेपालको मुख्य प्रवेशद्वार रहेको जानकारी गराउँदै देशकै ७० प्रतिशत औद्योगिक लगानी यस क्षेत्रमा रहेको कुरा बताए । उनले कुल राजस्वको ६० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व सड्ढलन हुने महामहिम राजदूतलाई जानकार
गाविस सचिव र कार्यालय सहायक निलम्बित
प्रस, वीरगंज, १३ भदौ/ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पर्सा जिल्लाका दुईजना कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय, काठमाडौंले पर्सा भिखमपुर गाविसका सचिव म. मन्सुर खाँ र सोही गाविसका कार्यालय सहायक जितेन्द्रप्रसाद चौहानविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सचिव र कार्यालय सहायक दुवैजना निलम्बनमा परेका हुन् । अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको अभियोग लगाई सचिव खाँ र कार्यालय सहायक चौहानविरुद्ध २०६८ चैत्र ११ गते सो गाविसका बासिन्दाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको अख्तियार शाखामा मुद्दा दायर गरेका थिए । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम हिनामिना गरेको, स्थानीय विकास निर्माण बजेटमा अनियमितता गरेको र गाउँ परिषद् गाउँमा नगरी शहरको होटलमा गुपचुप गरेको आरोप लगाउँदै पन्नालाल पटेल लगायत १५१ जनाले अख्तियार शाखामा मुद्दा दिएका थिए । मुद्दा छानबिन गरेर फाइल तयार गरी पर्सा शाखाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको र आयोगले यही भदौ ९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ अनुसार कुनै पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारी
आर्थिक विषयहरूले पनि महत्त्व पाउनुपर्‍यो
- विश्वराज अधिकारी नेपालमा राजनीतिक विषयहरूले जति महत्त्व पाउँछन्, त्यति आर्थिक विषयहरूले पाउँदैनन् । राजनीतिक विषयहरूमा सामान्य जनतासमेतले पनि बढी रुचि राख्छन् । त्यससम्बन्धी समाचारहरू सुन्न, पढ्न अनि हेर्न मन पराउँछन् । घरपरिवार, चियापसल, सभा–समारोह आदिमा केवल राजनीतिका लामा–लामा अनुत्पादक गफहरू मात्र हुन्छन् । तर, कसरी विकास एवं निर्माण कार्यहरूलाई स्थानीयस्तरमा मिलिजुली अगाडि बढाउने बारे सामूहिक छलफलहरू हुँदैनन् र त्यस्तो गर्नु आवश्यक छ भन्ने महसुस पनि गर्दैनन् । कतै कुनै कार्य विशेषले बीस/पच्चीस जना जम्मा भएको देख्नासाथ नेताहरू त्यहाँ पुग्छन्, अनि भाषण दिन शुरू गर्छन् । आफ्ना विरोधीहरूउपर गाली बान्ता गर्न थाल्छन् । उपस्थित स्रोताहरू पनि खुशीले गद्गद हुँदै ताली पिट्छन् तर भन्न सक्दैनन् कि तिमीहरूका यस्ता भाषणले मुलुकको गरिबी निवारणमा कुनै योगदान पुग्दैन बरु उल्टो जनमत विभाजित भएर हुनसक्ने जति पनि विकासका कार्यहरू हुन सक्दैनन् । नेपाली जनजीवनमा आर्थिक विषयहरूले भने खासै महत्त्व पाउन सकेका छैनन् । आर्थिक विषयहरूलाई महत्त्वहीन ठान्नु एउटा संस्कृति जस्तो नै बनिसकेको छ, पञ्चाय
डलरले बढाएको आर्थिक चुनौती
- शीतल महतो अमेरिकी डलरको मूल्यले सन् २०१३ मा सातौं रेकर्ड कायम गर्दै बुधवार अहिलेसम्मको उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । एक अमेरिकी डलरको मूल्य बिहीवार १०७ रुपैयाँ नाघेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवारका लागि तोकेको औसतदरअनुसार एक डलर किन्न १०५.३१ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य मुद्राको खासै धेरै प्रभाव नदेखिए पनि डलरले भने अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्छ । दिनदिनै डलर बलियो हुँदै जाँदा नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्दै गएको सूचकाड्ढमा देखिन थालेको छ । डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमाथि पर्ने गर्छ । भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुन थालेपछि त्योसँगै नेपाली रुपैयाँको पनि अवमूल्यन हुँदै गएको छ । दुई देशको मुद्राबीचको स्थिर विनिमय दर रहेका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो उतारचढाव नभएपनि नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन भने अवश्य भएको छ । बैंकहरूले भारतमा भएको कारोबारका आधारमा नेपालमा डलरको मूल्य तय गर्ने गर्दछन् । विगत चार महिनाको अवधिमा डलरको मूल्य झन्डै १९ प्रतिशतले बढेको तथ्याड्ढ छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ८८ प्रतिशत आयातको
बजार व्यवस्थापन अभावको मारमा आम जनता
- वीरेन्द्रकुमार यादव बजार महँगो हुने दशैं, तिहार, छठ जस्ता नेपालीको महान् चाडपर्व आउन लगभग २ महिना बाँकी रहँदै नेपाली बजारमा महँगी अकासिएको छ । सर्वसाधारण नेपालीले धान्नै नसक्ने किसिमले सामानहरू महँगो भएका छन् भने महँगीको कारण उपभोक्ताले वस्तु किन्नै छाडेकाले कतिपय व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यो उपभोक्ता र मुलुक दुवैका निम्ति ठूलो दुर्भाग्य हो । यो सड्ढट बाह्य तथा आन्तरिक दुवै कारणले उत्पन्न भएको छ । यतिखेर महँगी बढ्नुको प्रमुख कारण डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिलाई बताइँदैछ । भर्खरै डलर महँगो भएकोले त्यसको कारण तत्काल बजार महँगो नहुनु पर्ने हो । किनभने भारतबाहेकका मुलुकबाट आयात गरिने सामानको मूल्य मात्र वृद्धि हुनुपर्ने हो तर पहिलेदेखि सस्तो दरमा आयात गरी भण्डारण गरिएका सामान तथा भारतबाट समेत आयात गरिएका सामानको पनि मूल्य व्यापारीहरूले बढाई अत्यधिक मूल्य असुल गरिरहेका छन् । भण्डारण गरिएको सामानको यतिखेर मूल्य बढाउनु भनेको कृत्रिम मूल्य सिर्जना गर्नु हो, जुन विद्यमान कानुन अनुसार निषेधित छ । डलरको मूल्य नबढ्दै आयात भएका इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुमा १५ देखि २५ प्रतिशतसम
फोरेक्स र नेपाली मुद्रा अवमूल्यन
- ई. गोपाल श्रेष्ठ फोरेक्स भनेको फरेन एक्सचेन्ज हो अथवा विदेशी मुद्रा विनिमय । प्राय: हामी विदेशी मुद्रा भन्ने बित्तिकै अमेरिकी डलरलाई सम्झन्छौं । कारण सबै मुद्राको आधार मुद्रा अमेरिकी डलरलाई नै मान्दै आइएको छ । अमेरिकाले सन् २००८ को आर्थिक मन्दीबाट पार पाएपछि अमेरिकी डलर एकदम भारी हुँदै गएको छ । २०६८ साउनमा एक अमेरिकी डलर बराबर नेपाली रुपियाँ ७० थियो भने हाल २०७० भदौमा रु. १०५/– कटिसकेको छ । यो स्थिति हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकहरूका लागि भयावह छ । कारण, जहाँ पेट्रोलियम पदार्थदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी पार्टपुर्जा सबै डलरमा खरिद गर्नुपर्छ । अनि हामीलाई यो खरिद मूल्य एकदम नै महँगो पर्न जान्छ । डलरको भाउ अझै अकासिएर प्रति १ डलर नेपाली रुपैयाँ अझै ११२ सम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो अनुमान सत्य साबित हुन पुग्यो भने चर्को मूल्यवृद्धि अवश्यम्भावी छ । मूल्यवृद्धिले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्छ । मुद्रा अवमूल्यन हुँदा निकासी व्यापार फस्टाउन सक्छ । तर, हामीसँग त्यस्तो के वस्तु छ र हामी निर्यात बढाउन सक्छौं ? औद्योगिक उत्पादन बढाउन सकिएको छैन, गुण
सङ्घीयता र भ्रम
- श्रीमन्नारायण मिश्र आगामी निर्वाचनमा पनि सङ्घीयता नै प्रमुख मुद्दा हुने निश्चित छ । विगतमा पनि यसैमा सहमति बन्न नसकेपछि संविधान बन्न सकेन । नेपालमा सङ्घीयता अपरिहार्य छ, यसको आफ्नै महत्त्व छ । संसारमा सङ्घीयताको आवश्यकता दुई प्रमुख कारणले महसुस भएको हो । बढी जनसङ्ख्या एवं क्षेत्रफल भएका देशहरूमा प्रशासनिक कार्य कुशलतालाई छिटोछरितो सम्पादन गर्न, द्रुतगतिमा आर्थिक विकास होस् भन्ने ध्येयले तथा अर्को बहुजातीय, बहुभाषिक एवं विभिन्न धर्मसंस्कृति भएका देशहरूमा सबै जाति एवं समुदायका नागरिकको भाषा, संस्कृतिको विकास एवं द्रुत आर्थिक प्रगति होस् भन्ने उद्देश्यले सङ्घीयताको आवश्यकता महसुस गरिन्छ । नेपालमा दोस्रो किसिमको कारणले सङ्घीयताको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । संविधानसभाको आवश्यकता अधिकारको बाँडफाँटका निम्ति महसुस गरिन्छ । एकात्मक शासन प्रणालीमा देशका सम्पूर्ण शक्ति एवं अधिकार केन्द्रीय सरकारमा निहित हुन्छ, जबकि सङ्घीय शासन प्रणालीमा अधिकारको समुचित विभाजन भई त्यसको निगरानी सर्वोच्च अदालतबाट भइरहेको हुन्छ । नेपालमा विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी एवं विभिन्न धर्मलाई मान्ने मानिसहरू छन् ।
हुनत प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मङ्सिरमा हुने संविधानसभा निर्वाचन हुनै आँटेझैं गतिविधि बढाएका छन् । गतिविधि मात्र होइन, सबै राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय समितिको बैठक बसी निर्वाचन रणनीति तय गर्ने, उम्मेदवार छनोट गर्ने र चुनाव दौडाहाले निर्वाचन सँघारमैं आइसकेको भान पारेको छ । तर कुरा एउटै ठाउँमा अड्केको छस नेकपा–माओवादीसहित निर्वाचन बहिष्कारमा लागेका ३३ दलको प्रतिक्रिया । अहिलेसम्म यी दलले निर्वाचनमा जाने वा बहिष्कार गर्ने छरपस्ट भएको छैन । निर्वाचनमा भाग लिने दलहरू बहिष्कारवादीहरू आए पनि नआए पनि निर्वाचन हुन्छ नै भनिरहेका छन् । एकले अर्कोलाई जवाफ लाउने क्रममा निर्वाचन पक्षधर बहिष्कार हुँदैन, अन्ततोगत्वा बहिष्कारवादी पनि चुनावमा सहभागी हुन्छन् भनिरहेका छन् भने लगत्तै बहिष्कारवादीहरू सक्रिय बहिष्कार गर्ने अर्थात् चुनाव हुन नदिने भाषण ठोक्न थालिहाल्छन् । यसको निष्कर्षमा जनताले के बुझेको छ भने चुनाव भइ नै हाल्यो भने बहिष्कार पनि जोरदार किसिमले हुन्छ । सम्भवत: चुनाव नै हुँदैन होला । राजनीतिक दलहरूले हिजो पनि यस्तै गर्दै आएका छन् । यिनीहरू जुन कुरा जोडले भन्छन्, त्यै काम गर्दैनन् । निर्वाच
श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा राजयोग सेवा केन्द्रद्वारा प्रवचन तथा झाँकी
प्रस, वीरगंज, १२ भदौ/ श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र वीरगंजको अयोजनामा स्वर्गको चैतन्य झाँकी प्रवचन कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको छ । मान्छेले चाहिने जति प्रगति गरिसकेको छ, जहाँसम्म पुग्नु थियो पुगिसकेको छ । तर पनि मानिसलाई सुखशान्तिका साथ बाँच्न हम्मेहम्मे परिरहेको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला न्यायाधीश भोलानाथ चौलागाईले बताए । मनमा अशान्तिका कारण समाजदेखि राज्यसम्म लडिरहेको अवस्थामा छ । भगवान्ले सिकाएको बाटो अपरम्पार छ, आफ्नो आचरण, बानीबेहोरा सपारेर अगाडि बढे जोकोहीले सफलता पाउने कुरा कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि स्थानीय विकास अधिकारी गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए । अत्मा हामीसँग छ, परमात्मालाई मनमा लिएर अगाडि बढे जीवन सार्थक हुने ठाकुरले बताए । धेरै तनावको बेला हामी शान्ति खोज्छौं तर तनाव किन सोबारे जान्ने प्रयास नगर्दा समस्यामा पर्ने ठाकुरले बताए । सेवा केन्द्रकी क्षेत्रीय सञ्चालिका रबिना दिदीको सभापतित्वमा शुरु भएको कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश अमृत बस्नेत, समाजसेवी पशुपति विक्रम शाह, दिदी बेली, ब्रह्माकुमारी मेनका, ब्रह्माकुमारहरू ग
सिमरा उमावि फाइनलमा
प्रस,पथलैया, १२ भदौ/ नेपाल राष्ट्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिमरा कोकाकोला अन्तर्विद्यालय छात्रा फूटबल प्रतियोगिताको मध्यमाञ्चलस्तरीय छनोट खेलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । अखिल नेपाल फूटबल सङ्घको आयोजना र बारा जिल्ला फूटबल सङ्घको संयोजनमा सिमरा र·शालामा सञ्चालन भइरहेको प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधवार भएको सेमिफाइनल खेलमा पञ्चकन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय टाँडीलाई ३–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै सिमरा फाइनलमा प्रवेश गरेको हो । सिमराको जितमा सपना गोले, सपना बस्नेत र मञ्जु घिमिरेले समान एक–एक गोल गरेका थिए । फाइनल प्रवेश गरेको सिमराले बिहीवार जनज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय चन्द्रनिगाहपुरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । नवजीवन उच्च माध्यमिक विद्यालय नवलपुरलाई पराजित गर्दै जनज्योति यसअघि नै अन्तिम दुईमा प्रवेश गरिसकेको छ । फाइनलमा पुगेका दुई टिमबीच विजेता राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिताका लागि छनोट हुने बारा जिल्ला फूटबल सङ्घका महासचिव शम्भुसिंह ठकुरीले जानकारी दिए । यसैगरी सिन्धुपाल्चोकले कोकाकोला अन्तर्विद्यालय छात्र फूटबल प्रतियोगिताको मध्यमाञ्चलस्तरीय छनोट खेलको फाइनल खेलमा महोत्तरीला
टयांकरले तेल चोर्ने गरेको भेद खुल्यो
सिकेन्द्र पासवान, कलैया, १२ भदौ/ डिजल ढुवानी गर्ने टयांकीबाट डिप मिटरमा बन्दुक रड फिट गरी तेल चोरी गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ । गढीमाई आयल बरियारपुरमा बिहानै ना. १ ख ९१०९ को टयांकरमा १२ हजार लिटर डिजल लिएर वीरगंज मुर्ली घर भएका साहु प्रह्लादप्रसाद महतो र रक्सौल ४ डंकनका चालक छोटे मियाँले गढीमाई शिवशड्ढर आयल बघवन, स्वस्थानी आयल स्टोर बरियारपुर र न्यु गुप्ता कलैया आयल स्टोरमा तेल दिनका लागि ल्याइएको टयांकर बिहानै शड्ढा लाग्दा गढीमाई आयलका सञ्चालक भुलेन्द्र यादवले चेक गर्दा टयांकीमा रहेका चार वटा चेम्बरबाट ४० देखि ५० लिटर चोरी गरेको रहस्य पत्ता लागेको छ । एउटा आयल निगमलाई एक पल्टमा तीन हजार लिटर डिजल दिने गरेकोमा एक वर्षमा भुलेन्द्र यादवको गढीमाई आयलमा मात्र १ हजार दुई सय ८४ लिटर तेल कम भएको उनले बताए । चोरीको रहस्य खुलेपछि साहु महतो फरार भएका थिए । साहु यादवले प्रहरीलाई खबर गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराबाट प्रशासकीय अधिकृत थमन सिह थापा, घरेलु तथा साना उद्योगका प्रमुख नागेन्द्र चौधरी, प्रहरी निरीक्षक उत्तमप्रकाश बराल, सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प बरियारपुरबाट गएक
- सञ्जय साह ‘मित्र’ हरेक वर्ष बढ्दो दरमा विदेसिइरहेका नेपालीहरूको अवस्था हेर्दा नेपालीहरू नेपालप्रति कम र विदेशप्रति बढी आश्रित बनिरहेका छन् । देशको विकासको लागि यो अवस्था सकारात्मक होइन । विदेश जानेमध्ये केहीको घरपरिवारको पहिलेभन्दा बिजोग भएको देखिएको छ । कतिपयले घरमा बालबच्चा र पत्नी हुँदाहुँदै विदेशमैं बिहे गरेर घरजम गरेको खबरसमेत आउन थालेको छ । हो, मानव हो, मानवको मन हुन्छ र केही जैविक आवश्यकता पनि हुन्छ । नेपालीहरू विदेशमा आफ्नो जवानी खर्च गर्न मात्र जान्छन् । सामान्यरूपमा अठारदेखि चालीस वर्ष उमेर समूहका मानिस विदेश गइरहेका छन् र यो अत्यन्त उर्वर उमेर हो । यही उमेरमा उसले एकातिर बढी कमाएर आफ्नो सपना साकार पार्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर मोजमस्ती पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा दुवै कुरा एकै ठाउँमा निम्नवर्गका लागि सम्भव छैन । यसैले अधिकांश युवा पहिले कमाइ गर्न विदेश जाने तयारी गर्छन् । गत महिना हवाइजहाजको बाटो करिब पचास हजार नेपाली कामको खोजीमा विदेश गए । भूपरिवेष्ठित देश भएको हुनाले भारत र भारत भएर तेस्रो देशमा कामको खोजीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या अझ बढी नै होला । काम गर्न
अपमानको बदला सम्मान होइन
गाउँमा सरस्वती देवीलाई बोक्सीको आरोप लगाएर अमानवीय व्यवहार गरियो र उनलाई शहरमा सम्मान गरियो । सम्मानबाट सरस्वती देवीलाई केही राहत मिलेको हुन सक्छ तर समग्र समाजको हकमा भने यसले कुनै उपलब्धि पुर्‍याउँदैन । सरस्वती देवीमाथि हिंसा गर्ने व्यक्तिहरूको दुष्कृत्य सम्पूर्ण समाजले हेर्‍यो, समाजमा नराम्रो छाप पर्‍यो र त्यो छाप झन् गहिरियो जब सरस्वती देवीलाई छुट्टै बोलाएर सम्मान गरियो । सरस्वती देवीलाई सम्मान गरेर उनीप्रति दुव्र्यवहार गर्नेहरूलाई अभयदान दिएजस्तो भयो । किनभने पीडितले सम्मान पाउनु भनेको आइपरेको दु:खमा राहत प्राप्त गर्नु मात्र हो । सरस्वती देवीलाई सम्मान गर्नु अनुचित हो भन्न खोजिएको होइन । विश्रामपुर आफ्नो थलोमा सरस्वती देवीलाई बोक्सी आरोप लगाएर अमानवीय व्यवहार मात्र गरिएन उनको थातथलो नै खोसियो । उनले पाउने न्याय भनेको उनीसँग दुव्र्यवहार गर्नेलाई कानुन अनुसार दण्ड र उनको सम्मानपूर्वक थातथलोमा पुनर्वास हो । सरस्वती देवीलाई यो सम्मान दिएर कहीं समाजले आफ्नो कर्तव्यको इतिश्री भयो भनी ठान्ने त होइन, भन्ने डर उत्पन्न भएको छ । यो हाम्रो समाजको मनोविज्ञान हो । हामी कर्तव्यबाट जहिले प
निजगढमा जङ्गली हात्तीले घर भत्कायो, स्थानीय त्रसित
जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, ११ भदौ/ बस्तीमा ज·ली हात्तीले उत्पात मचाउँदै घर भत्काएपछि निजगढका बासिन्दा चिन्तित हुन थालेका छन् । पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग नजिकै घनाबस्ती निजगढ–९ का गेगनिधि पुडासैनीको घर भत्काएपछि वरपरका बासिन्दासमेत त्रसित छन् । सोमवार राति ९:३० बजे र सोही राति १:३० बजे एउटा ज·ली हात्तीले काठेघरको माथिल्लो चोटाको भकारीको धान खाई घरको बेरासमेत भत्काएको थियो । पहिलोपटक राति हात्ती आउँदा गेगनिधिकी १५ वर्षीया नातिनी विपनाले थाहा पाई छिमेकीलाई गुहारेपछि छिमेकी र प्रहरीको प्रयासमा हात्तीलाई ज·ल खेदेका थिए । राति पुन: हात्ती फर्केर घरको बार, झ्याल भत्काउँदै उत्पात मचाउन थालेपछि बिरामी, बालक, महिलासहित पाँचजनाले भागेर ज्यान बचाएका थिए । “स्कूलको होमवर्क गरिरहेकी थिएँ । अँध्यारोमा घर्‍याकघुरुक आवाज आयो । काठेघरको माथिल्लो तल्लाको बारमा अढेस लगाएको फ्लेक हल्लियो । फर्केर हेर्दा ज·ली हात्ती देखें र कराएँ । सुतेका आमा, आफन्त र छिमेकीले थाहा पाए । पल्लो घर देवर राजेन्द्रको छ । हात्ती आएको थाहा पाएपछि अलमलमा परेका हामीलाई देवरले ढोकाबाट निस्कन भनेपछि मात्र बाहिर आएर रोडको प्रतीक
बोक्सी आरोपमा प्रताडित सरस्वती देवी सम्मानित
प्रस, वीरगंज, ११ भदौ/ बोक्सीको आरोपमा छिमेकीबाट प्रताडित सरस्वाती देवीलाई आज वीरगंजमा सम्मान गरिएको छ । वीरगंज युवा समाजले महिला हिंसाविरुद्ध आज वीरगंजमा जुलुस तथा सभाको आयोजनासँगै पीडित सरस्वती देवीलाई सम्मान गरेको हो । पर्साको विश्रामपुर गाविस–१ निवासी ४५ वर्षीया एकल महिला सरस्वती देवीलाई गत साउन २३ गते उनको जेठाजु नाता पर्ने छिमेकी हृदयदेव राउत बरै र गिरिजा राउत बरैको परिवारले संयुक्तरूपमा नियन्त्रणमा लिएर यातना दिई मलमूत्र ख्वाएका थिए । खेतमा काम गरिरहेकी सरस्वतीलाई पीडकहरूले नियन्त्रणमा लिएर लछारपछार गर्दै गाउँनजिक खोलामा लगेर यातना दिएका थिए । घटनापछि त्रासका कारण गाउँबाट विस्थापित भई वीरगंजस्थित आफन्तजनको डेरामा आश्रय लिइरहेकी सरस्वती देवीको नेतृत्वमा आज वीरगंज युवा समाजले महिला हिंसाविरुद्ध मैनबत्ती जुलुस निकालेको थियो । माईस्थान मन्दिर परिसरबाट शुरू भएको जुलुस घण्टाघर चोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाशकुमार बजिमयले कपडा प्रदान गर्दै सरस्वती देवीलाई सम्मान गरेका थिए । घटनामा संलग्न पाँचजना अभियुक्तमध्ये तीनजनाला
गोलमेच सम्मेलन र हाम्रा सत्ताधारीहरू
– गोपाल ठाकुर अस्ति बिहीवारको मात्रै कुरा हो । चार दलीय संयन्त्र तथा नेकपा–माओवादी सम्बद्ध मोर्चाका नेताहरू काठमाडौंमा गोलमेच सम्मेलनमा बस्ने सहमति गरे । सङ्घीय समाजवादीहरूसँग पनि त्यही दिन संयन्त्रका नेताहरू बसेका थिए । गोलमेच सम्मेलनको सहमतिलाई सङ्घीय समाजवादीहरूले पनि सकारात्मक रूपमैं लिए र त्यहीं टु·ोमा पुग्ने निधो गरी उठे । दुई दिनमा गोलमेचमा केके विषयमा छलफल गर्ने हो त्यसको एजेन्डा तय गर्ने कुरो थियो । एजेन्डा तय गर्नु भनेको निर्णयमा पुग्नु होइन । तर पनि माओवादीहरूले संविधानसभा निर्वाचन मात्रै सार्ने रणनीति लिएका हुन् भन्दै तयारी छलफल पनि अलमलियो । त्यस पछि सत्तापक्षको एउटै शर्त र अडान दोहोरिंदैछ : सरकार र संविधानसभा निर्वाचन मितिमा परिवर्तनबाहेक अरू कुरामा मात्रै कुरा गर्ने गरी गोलमेच सम्मेलन सम्भव छ, त्यसैले यसमा सहमत भए आऊ होइन भने हामी अगाडि बढ्छौं । संसारभरि एउटा नजीर छ । विपक्षीहरू आफ्ना असहमतिका कुरालाई माग बनाएर आन्दोलन गर्छन् । आन्दोलन सफल भए तिनै कुरा लागू गर्छन् । बीचमा वार्तामा जानुपर्‍यो भने तिनै मागहरू उनका अडानका रूपमा आउँछन् । यसरी हेर्ने हो भने माओवादीस